सो सिम्पल सुन्दरी – Sourya Online
सो सिम्पल सुन्दरी
सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १६ गते २:१६ मा प्रकाशित
‘तिमी त निकै फोटोजेनिक रहिछौ नि ?’ प्रशंसाले लजाइन् उनी । अनि थप फोटोसुटका लागि तयार भइन् । मिनिस्कर्टमा सजिएकी उनी सुनाउँदै थिइन्– ‘आफूलाई सहज जुनसुकै ड्रेस लगाउन सक्छु तर ड्रेसमा उति धेरै चुजी भने होइन ।’ उनलाई आफ्नो आखा निकै राम्रो लाग्छ रे ? सबैको नजरमा आकर्षक देखिनुलाई ग्ल्यामरको परिभाषा मानेकी यति राम्री सुन्दरीलाई ‘क्या च्वाँक’ भन्दै जिस्क्याउने पनि प्रशस्तै होलान् । त्यस्तो बेलामा यिनको प्रतिक्रिया के होला ? ‘हल्का मुस्काएर हिँडिदिन्छु, एक–दुई पटकसम्म जिस्क्याउँदा खासै नराम्रो लाग्दैन ।’ यी धारणा अनि प्रतिक्रिया हुन्, भावना रेग्मीका । जो छोरी हुन्, निर्देशक शिव रेग्मीकी । यतिखेर उनी आफ्नै बाबुको चलचित्र सो सिम्पलबाट नायिकाका रुपमा डेब्यु गर्दै छिन् ।
उनको पारिवारिक वातावरणै चलचित्रमय । त्यसैले नर्सिङ अध्ययन गरिरहेकी उनी मोडलिङ हँदै चलचित्रको ग्ल्यामर दुनियाँतिर पनि तानिइरहेकी छन् । इनोभेटिभ कलेज अफ हेल्थ साइन्समा ब्याचलर प्रथम वर्षमा पढिहरेकी भरतपुर–४, चितवनकी स्थायी बासिन्दा उनले सुनाइन्– ‘घरपरिवारको माहोलले नै चलचित्रबाट टाढा रहन दिएन ।’
पाच फिट पाच इन्च हाइटकी भावनाको ग्ल्यामरका मामिलामा आफ्नै अडान छ– ‘ग्ल्यामरका नाममा छाडापन त कदापि स्वीकार्दिनँ, चलचित्रको विषयवस्तुले आवश्यकता देखाएअनुसार मात्र गर्ने हो ।’ चलचित्र क्षेत्रमा टिक्ने नाममा छाडा हुन नहुने यी नवयौवनालाई लाग्छ । सेक्स, विवाह अनि प्रेमका मामिलामा यी सुन्दरीका धारणा यस्ता छन– सेक्स बायोलोजिकल नियम हो । तर, बिहे अगाडिको सेक्सचाहिँ उचित होयन । माया पनि बिहे पछाडिको नै वास्तविक हुन्छ ।’